Mhlawumbi, ukukhawuleza ngokukhawuleza kuphela kunokubona inkqubo yokuhlamba njengendlela yokucoceka. Eyona mininzi ikhona kuthi, le yinto yokuzonwabisa kunye nenkonzo yobuhle. Ngako oko, indlu yakho yokuhlambela ingaba yi-oasis apho ungakwazi ukuphumla kwaye uhlambe inkxalabo yosuku oludlulileyo.
Mhlawumbi, ukukhawuleza ngokukhawuleza kuphela kunokubona inkqubo yokuhlamba njengendlela yokucoceka. Eyona mininzi ikhona kuthi, le yinto yokuzonwabisa kunye nenkonzo yobuhle. Ngako oko, indlu yakho yokuhlambela ingaba yi-oasis apho ungakwazi ukuphumla kwaye uhlambe inkxalabo yosuku oludlulileyo. Ngaphezu koko, namhlanje sinakho ukufumana ubuninzi beemveliso eziyingqungquthela ezenza inxaxheba ebalulekileyo ekulondolozeni ulutsha kunye nobuhle, kuphela iimveliso eziqhenekisayo zokukhupha isikhumba.
Yimangaliso evela ePiot
I-pair joli-sop-scrub kunye ne-mineral mix mix for baths-inikezela ngononophelo olusisigxina kwesikhumba seoli, ukuphucula kakhulu imeko yayo. I-Soap iyenziwa nge-Irish moss-uhlobo olukhethekileyo lwe-algae ebomvu, edumileyo ngenxa yeempahla zayo ezixubileyo nezolonwabo. Umxube we-Aromatic wokuthatha uhlamba kunye nevumba leminti kunye neenkuni zokhuni iqukethe ioli. Isithako esingokwemvelo sizaliswe ngama-acids afunekayo, abonelela ukunakekelwa kwesikhumba. I-oyile igcwalisa i-epidermis ngamandla amakhulu, inika ubumnandi kunye nefuthe, ngelixa ikunceda ukulinganisela ukukhuselwa kwe-sebum. Njengengxenye yemali - izithako zemvelo kuphela eziye zavavanywa ukhuseleko. Iimveliso ezinonopheliso zesikhumba esithambileyo azibangeli ubundlobongela kwaye zingasetyenziselwa abantu abanesikhumba esichukumisayo.
I-sweet scrab-colored scrub kunye ne-ukhilimu ene-soft, i-melting structure yinto enyanisekileyo yesikhumba. Ngokubunjwa kwayo - iziqulatho ezixabisekileyo ze-hematite kunye neyeezixhobo ezihlambulukileyo kwaye ngexesha elifanayo zikhupha ubuso bomzimba, zikhulule kwiiseli ezifile. Ukugqithisa ngokufanelekileyo ukucoca nokunciphisa ama-pores awandisiweyo, kusebenze ukuhamba kwegazi. Ngenxa yoko, ukondla kwesikhumba kuphucula, kukhanyisa, kuba ngethenda ngokungaqhelekanga kwaye kuluhlaza kumgca.
Emva kokusebenzisa ukutshiza, ukuphefumula kwamaselula kwesikhumba kuyaqina, kuya kuba lula ukunyuka kwezonyango zokunyamekela.
I-Duet yokutya kunye nokukhuselwa kwesikhumba esomileyo nesichukumisayo. Insipho enomsoco ophezulu, ococekileyo ngobusi bendalo, uhlambulula ngobumnene ulusu olumileyo nolunomdla, olusondezayo, olunomsoco, oluhlaziyayo kwaye olungaphazamisi ukulinganisela kwendalo yayo ye-hydrolipid.
Ityuwa yokuhlamba kunye neoli efunekayo ye-nut macadamia iqukethe i-antioxidant-pal-mitoleic acid, ene-anti-aging effect, ilwa nokuguga kwamaseli e-epidermal.
Iphunga elikhanyayo le-lavender, u-honey kunye ne-vanilla, etholakala kumafutha afumene kakhulu ngokubhekiselele kwiidlophu zendabuko zamaFulentshi.
Oku akusiyo imbiza enamakhaphu amnandi, kodwa unonophelo olunzulu kwimilenze ekhathele! Ibhokhwe ekhangayo kunye nephunga elimnandi, eliphonswe kwibheji liguqula amanzi athabileyo ibe yi-SPA emangalisayo. Ngokukhawuleza kunciphisa ubunzima emilenzeni nasekukhathaleni, kuqokelelwe emva komhla owenziwe kwizithende zakhe. Uthobisa ulusu lweenyawo, ululungiselele ukunakekelwa okwalandelayo, luququzelele ukutshatyalaliswa kweeseli ezilalisiweyo. Emva kwesithende sokuhlamba esithokozelayo, uzonwaba ngokukhawuleza.
Ngokusetyenziswa ngokuqhelekileyo kwemveliso yokonkcenkceba yesikhumba esithambileyo, ulusu lonyawo luyancipha, lukhuni, ingqolowa kunye neengqolowa aziqhelekanga.
Isiqhelo esihle semveliso yokonkcenkceba yesikhumba esithambileyo ukunyamekela isikhumba esiqhelekileyo. Ukusebenza kwayo kusekelwe kwizenzo ezimbini zezixhobo zezityalo - amaqabunga e-green tea kunye ne-dogrose. I-Soap, edibanisa izithako ezinommangaliso ezimbalwa, ikhupha iiseli ezifile, ibuye ivuselele isikhumba, iyinike ukutshabalalisa, ukuthobeka kunye nokukhanya.
Iityuwa zokuhlamba ziveza zonke iingenelo zendalo: i-caffeine kunye ne-polyphenols yetiyi eluhlaza iyanciphisa umphumo kwesikhumba se-radicals kwaye iyakhusela ukuguga kwangaphambili. Ioli yohlobo lwe-nature ishukumisa kakuhle umzimba kwaye iphucula imeko yayo.
Iphunga elicocekileyo le-lemons elitsha, amanqaku e-geranium kunye ne-nutmeg inika imvakalelo emihle kokuqala nasekupheleni kosuku.
Iimpawu zendalo kunye nezandla zabo
Iimpawu zendalo ezidalwe ngezandla
Kuthekani ukuba loo mntu uthembele kum?
Ndiyena mhle kakhulu kwaye ndikhangayo
Uphupha ntoni iphupha?
Ukuzivocavoca ekhaya ngaphakathi
Iindlela zokupheka zokunyusa iinwele
Umtshato, intsapho, ubudlelwane bomtshato
Isaladi yokugqoka i-mustard kunye ne-cherry tomate